Football Khabar » रामोसलाई पिएसजी भित्र्याउन नेइमार सक्रिय : लक्ष्य लगातार च्याम्पियन्स लिग उपाधि !
रामोसलाई पिएसजी भित्र्याउन नेइमार सक्रिय : लक्ष्य लगातार च्याम्पियन्स लिग उपाधि !
फ्रेन्च क्लब पिएसजीका ब्राजिलियन स्टार खेलाडी नेइमारले स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका कप्तानसमेत रहेका प्रमुख डिफेन्डर सर्जियो रामोसलाई आफ्नो क्लबमा अनुबन्ध हुन अनुरोध गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । स्पेनिस मिडियाले प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार यदि रामोसले रियल छाडेर फ्रान्स आउन राजी भए तीन सिजनको सम्झौताका लागि क्लब तयार रहेको छ ।
त्यसैगरी, पिएसजीले रामोसका लागि वार्षिक २० मिलियन युरो तलब दिन पनि प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । रियलसँग रामोसको सम्झौता यो सिजनको अन्त्यसँगै सकिँदैछ । रामोस र रियलबीच थप सम्झौता नभए समर विन्डोमा उनले फ्रि ट्रान्सफरमा आफूले चाहेको क्लबमा जान पाउनेछन् ।
रियल ३४ वर्षका रामोससँग छोटो सम्झौताका तयार देखिए पनि रामोसले भने यदि सम्झौता थप गर्नुपर्ने भए त्यो तीन सिजनका लागि हुनुपर्ने अडानमा रहेकाले नयाँ सम्झौताका लागि थप प्रयास भएको छैन । रियलमा रामोसको अवस्था बुझेका नेइमारले उनलाई पिएसजीमा अनुबन्ध हुन अनुरोध गरेका हुन् ।
रामोस र नेइमारबीच व्यक्तिगत रूपमा राम्रो सम्बन्ध रहेकाले रामोसलाई फकाउन नेइमार सक्रिय भएका हुन् । रक्षापंक्तिमा समकालीन् फुटबलमा विश्वकै नम्बर वान डिफेन्डर रामोसको अनुबन्धपछि पिएसजी अझै बलियो हुने लिग वान च्याम्पियनको अपेक्षा रहेको देखिन्छ । रिपोर्टअनुसार नेइमारले रामोससँग ‘यदि तिमी पिएसजी आयौ भने म र एमबाप्पे दुवैले क्लबसँग सम्झौता लम्ब्याउने’ विश्वास दिलाउन प्रयास गरेका छन् ।
यतिसम्म कि, नेइमारले त रामोसको अनुबन्धपछि पिएसजीले लगातार दुई च्याम्पियन्स लिग जित्ने विश्वास पनि रामोसलाई दिलाएका छन् । रामोसको अनुबन्धपछि टिम सबै हिसाबले मजबुत बन्ने र ठूला उपाधिको दाबेदारी बढ्ने भन्दै नेइमारले रामोसलाई फकाएको बताइएको छ ।
पिसजीमा नेइमार र एमबाप्पेको सम्झौता सन् २०२२ मा एकसाथ सकिँदैछ । च्याम्पियन्स लिग नजित्दासम्म पिएसजीले यी दुवै खेलाडीलाई सम्झौता थपेर भए पनि राख्न चाहेको छ । पछिल्लो समय पिएसजीसँग इटालियन युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नाम पनि जोडिँदै आएको छ ।
प्रकाशित मिति ४ मंसिर २०७७, बिहीबार २१:४०